116. इन्टरनेटमा मानवअधिकार
You are at Home Podcast 116. इन्टरनेटमा मानवअधिकार
इन्टरनेट र साइबर स्पेसमा मानवअधिकार कसरी सुरक्षित र सवलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा आजको छलफललाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधि र इन्टरनेट हरेक मानिसको अभिन्न अंग जस्तै भैसकेको छ । यो माध्यमको प्रयोगमा मानवधिकारका विभिन्न संवेदनशिल पक्षहरु पनि जोडिएर आएको छ । खासगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि नेपालमा बन्दै गरेका कानुन र नीतिहरुमा मानवअधिकारको संरक्षणको विषय ओझेलमा नपरोस भनी आजको छलफल केन्द्रीत गरिएको हो ।
छलफलमा मानवअधिकार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न बहुसरोकारवाला प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ र यो छलफललाई सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल । सुनौं, आजको छलफललाई फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ११६ औं श्रृङ्खलामा :